सडकको बिस्तार गर्छौ , उद्योगीले साथ दिनुपर्छ : वडा अध्यक्ष सुरेश यादव - Arthapage
सडकको बिस्तार गर्छौ , उद्योगीले साथ दिनुपर्छ : वडा अध्यक्ष सुरेश यादव
प्रकाशित मितिः ९ पुष २०७५, सोमबार १६:५७ December 24, 2018
बाँकेको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा उद्योग सन्चालनको आर्कषण छ । यहाँ सिमेन्ट उत्पादनदेखि जडिबुटी प्रशोधनसम्मका दर्जन बढि उद्योग सन्चालन भइरहेको छ । थप उद्योग समेत सन्चालनमा आउने तयारीमा छन् । करोडौंको उद्योग सन्चालनमा आएपनि पुर्वाधारको अवस्था भने निकै कमजोर छ । पुर्वाधार बिनानै उद्योगहरु सन्चालनमा आउँदा स्थानीयबासिन्दाले अनेकौ दुःख झेलिरहेका छन् । पिप्रहवादेखि खजुरारोड जाने सडकको अवस्था बेहाल छ । तर पनि स्थानीयबासिन्दा र जनप्रतिनिधि उद्योगप्रति आक्रोस होइन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । यसै बिषयमा वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष सुरेश यादवसंग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरेका छौं ।
सुरेश यादव, अध्यक्ष, वडा नम्बर ६ जानकी गाउँपालिका
यहाँहरुको वडा त औद्योगिक ग्राम जस्तै रहेछ । जता हेर्दा पनि उद्योग नै देखिने ।
-हो, हाम्रो गाउँपालिका अझ खासगरी वडा नम्बर ६ मा ठुला उद्योगहरु सन्चालनमा छन् । दर्जन बढि करोडौंका उद्योगहरु सन्चालन भएको देख्दा हामी पनि खुसी छौं । आर्थिक समबृद्धिका लागि उद्योग, कलकारखानाहरु फस्टाउनुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय तह होस् चाहे अन्य तहका सरकारहरु उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । हामीले यही नीति अख्तियार गरेका छौं । हाम्रो गाउँपालिकाले गाविस हुनेबेलाकै राजश्वहरु लिइरहेको छ । बृद्धि गरेका छैनौं । उद्योग, कलकारखाना सन्चालनमा आउनु त राम्रै हो तर त्यसबाट स्थानीयले फाईदा पाउन सकेनन् भन्ने पिर लाग्ने रहेछ ।
स्थानीयले रोजगारी नपाएको अवस्था छ र ?
-जुन अनुपातमा पाउनु पर्ने हो त्यसरी पाएका छैनन् । यत्रा उद्योगहरु सन्चालन हुँदा अब त रोजगारी पाइने भो भनेर हामी ज्यादै खुसी भएका थियौं । तर छैन त्यस्तो । जम्मै कामदार बाहिरबाट ल्याईएको छ । यहाँका मानिसहरुलाई सिपका आधारमा, भोली आन्दोलन गर्छन भन्ने नाममा बिभेद गरिएको छ । घरछेउमै यति धेरै उद्योगहरु खुल्दा पनि हामीले रोजगारी पाएनौं भनेर गुनासो आउने गरेको छ । तर अब त्यसरी हुँदैन , उद्योगहरुले स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
राजश्व संकलनको अवस्था के छ ?
-अति कम राजश्व लिइरहेका छौं । गाविस हुँदा जे थियो, अहिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएका छौं । तर दुर्भाग्य त्यही कर दिन पनि केही उद्योगलाई महाभारत भएको छ । बार्षिक दश हजार नदिने उद्योग पनि छन् । त्यसलाई कारवाही गर्ने तयारीमा छौं । पटक पटक भन्दा पनि राजश्व नबुझाउनेलाई कारवाही नगरी भएको छैन ।
बिस्तार गर्न लागिएको बाटो देखाउँदै वडा अध्यक्ष यादव ।
यतिका उद्योग छन् तर सडक पुर्वाधारको अवस्था त सन्तोषजनक रहेन छ ?
-सडकको भरपर्दो पुर्वाधार नभए पनि उद्योगहरु खुलेका छन् । सिक्टाले बनाउने नहरको तीन मिटर बाटोलाई हेरेर उद्योग सन्चालन भइरहेका छन् । यसले गर्दा यहाँ सर्बसधारणहरुलाई निकै मुस्किल परेको छ । थुलो लगायतका प्रदुषणका कारण स्वासप्रश्वासको समस्या भइरहेको छ । यहा प्रत्येक दिन यस्ता रोगका बिरामीहरु थपिएका छन् । सिक्टाको नहर बन्ने भएकाले हामीले थप काम सुरु गर्न सकिरहेका छैनौं । नत्र तीन मिटर सिक्टा र थप चार मिटर गरेर सात मिटर बाटो बनाउने तयारी गरेका छौं । त्यसका लागि हामीले ३ करोड ३५ लाख व्यवस्था गरेका छौं । सर्बसाधारणबाट लिने जग्गाका बिषयमा छलफल गर्दैछौं ।
सडक निर्माणको बजेटको व्यवस्था कसरी गर्नुहुन्छ ?
-३ करोड ३५ लाख हामीले व्यवस्था गरेका छौं । बाँकी सहयोगका लागि उद्योगी, व्यवसायीहरुले साथ दिनुपर्छ । यहाँ करोडौको लगानी छ । स्थानीयका लागि उहाँहरुले आखिर निश्चित प्रतिशत सहयोग गर्नैपर्छ । सडक निर्माणको लागतको चालिस प्रतिशत उहाँहरुले र साठ्ी प्रतिशत स्थानीय तहले व्यहोर्ने गरी काम गर्छौ । उहाँहरु पक्कै पनि सकारात्मक हुनुहुनेछ ।
प्रकाशित मितिः ९ पुष २०७५, सोमबार १६:५७ |
Prevमुख्यमन्त्री आदित्यनाथसंग भेट्न व्यवसायीको टोली लखनउमा, नेपालगन्जका बिषयमा के कुरा उठ्छ ?
Nextहोटल व्यवसायी संघ बाँकेको अधिवेशन स्थगित